कांग्रेस पदाधिकारी जम्बो बन्दै, बाबुराम-कमल-महन्थसँग एकता !
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५ , 5.1K जनाले हेर्नुभयो
काठमाडौं, १४ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी जम्बो हुने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जम्बो पदाधिकारी मनोनित गर्ने तयारी गरिरहेको कांग्रेस निकट उच्च स्रोतले जनायो ।
तर यसको लागि अब बस्ने महासमिति बैठकबाट उनले विधान संशोधन गर्नेसम्मको तयारी थालेका छन् । १ जना बरिष्ठ उपसभापतिसहित ४ उपभासपति राख्ने देउवाको आन्तरिक तयारी रहेको छ । त्यस्तै उनले महामन्त्री पनि ४ जना राख्ने मनशाय बनाएका छन् । पदाधिकारीको लागि थुप्रै शीर्ष नेताहरु आकांक्षी देखिएपछि सभापति देउवाले उनीहरुको व्यवस्थापनका लागिपनि पदाधिकारी जम्बो बनाउन लागेका छन् ।
त्यस्तै सह–महामन्त्री पनि ७ जना राख्नेगरि देउवाले आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल चलाएका छन् । छरिएर रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता गर्ने भन्दै देउवाले केन्द्रिय समितिको सदस्य संख्या पनि बढाउने भएका छन् ।
देउवा निकटका नेता गोपालमान श्रेष्ठले पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको जानकारी अनुसार कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य अब १५० सम्मको राखिनेछ । ‘त्यसको लागि अहिले छलफल भैरहेको छ’ उनले भने ।
केन्द्रिय सदस्य संख्या किन बढाउनुपर्यो भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘पार्टीमा विजय गच्छदारजी आउनुभएको छ, उहाँका नेताहरुलाई पनि व्यवस्थापन त गर्नुपर्यो नि, मोटामोटी सहमति भैसकेको छ, उहाँको लागि २० जना सदस्य रहनेगरि संख्या छुट्याईएको छ।’
स्रोतको अनुसार सभापति देउवाले राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा नेताद्धय कमल थापा र पशुपति शमशेरलाईपनि एकताको लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।
यता केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन समीक्षासम्बन्धी गत चैत ९ गतेदेखि जारी बैठकमा बोल्ने दुई नेताले आज उपसभापतिमा दाबी गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा आज नेता विजयकुमार गच्छदार र गोपालमान श्रेष्ठले आआफूले उपसभापति पाउनुपर्ने माग गरे।
बैठकमा नेता गच्छदारले आफूलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन निर्वाचनअघि नै सभापति शेरबहादुर देउवाले बताए। गच्छदारअघि बोलेका नेता श्रेष्ठले पनि उपसभापतिमा आफ्नो दावी पेश गरेका थिए। समीक्षासम्बन्धी बैठक निरन्तर जारी छ। बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार बिहान बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा बोल्दै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य विजय गच्छदारले नेपाली कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिक एकीकरण हुँदा भएका सहमति लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हिजो तीन घण्टा बोलेका गच्छादार आज पनि बैठकको शुरुवातमा बोलेका थिए । उनले पार्टी एकीकरणको समयमा गरिएको सहमति अनुसार उपसभापतिको दाबी गरेका थिए। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मात्रै मनोनित हुने विधानका कारण गच्छदारलाई उपसभापति बन्न नसक्ने विधानको अड्चन छ।
गच्छदार लगत्तै बोलेका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दलमा पारदर्शिता नभएको भन्दै सभापतिको आलोचना गरेका थिए। पौडेलले निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। पौडेलले विधान विपरीत नेतृत्व चलेको भन्दै सभापतिको आलोचना गरेका थिए।
जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीको प्रतिवेदन भोलि पेश हुने बताइएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीको प्रतिवेदनले हालसम्म उठेका धारणाहरुको सम्बोधन गर्ने बताए। दलको आगामी कार्यनीति पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको उनले बताए। महामन्त्रीको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएपछि सबैका सुझाव समेटेर पारित गरिने उनले जानकारी गराए। बैठक शनिबार ९ बजे बस्ने जनाइएको छ । रिपोर्टर्स नेपाल